स्वर्गदूतहरू, सबैभन्दा उच्च परमेश्वरका सेवकहरू आधारभूत परीविज्ञान हारून जेपी हैकेट | धर्मशास्त्र 04/06/2019 | Lost Sheep for Christ
स्वर्गदूतहरू, सबैभन्दा उच्च परमेश्वरका सेवकहरू आधारभूत परीविज्ञान हारून जेपी हैकेट | धर्मशास्त्र 04/06/2019
भाइहरू र बहसहरू, परमेश्वरले संसार सृष्टि गर्नुअघि उहाँले स्वर्गदूतहरू बनाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई सेवा गर्न र उहाँलाई प्रेम गर्न सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सृष्टिको एक परिवारमा एकताबद्ध हुन उद्देश्य तिनीहरूलाई सिर्जना गर्नुभयो। त्यहाँ बाइभलमा चिनिन्छन् र विभिन्न धर्मशास्त्रका रूपमा नौ छनौट वा प्रकारका स्वर्गदूतहरू छन्। 
* सेराफिम: अर्थ “जलाउने”। तिनीहरूसँग परमेश्वरको लागि सबैभन्दा तीव्र प्रेम छ र उहाँलाई उहाँको प्रशंसा गर्ने सबैभन्दा ठूलो स्पष्टता संग उहाँलाई बुझ्दछन्।
* चेर्बिम: अर्थ “बुद्धिको पूर्णता”। तिनीहरू परमेश्वरको ईश्वरीय प्रवीणता र उहाँको प्राणीहरूको लागि योजनालाई विचार गर्छन्।
* सिंहासन: ईश्वरीय न्याय र न्यायिक शक्ति को प्रतीक। तिनीहरूले परमेश्वरको शक्ति र न्यायलाई विचार गर्छन्।
यी पहिलो तीनले ईश्वरलाई सीधा हेर्नुहोस् र मन पराउँछन्। अर्को तीन प्रेमीहरू ब्रह्मांडमा परमेश्वरको योजना पूरा गर्छन्।
* डोमेन (वा डोमेन): अर्थ “प्राधिकरण”। तिनीहरू स्वर्गदूतहरूको कम सेवकहरूलाई शासन गर्छन्।
* भित्रीहरू: मूलतः बिजुली वा शक्ति लाई सुझाव दिइएको छ। तिनीहरूले डोमिनियनका आदेशहरू लागू गर्छन् र स्वर्गमार्गहरूलाई शासन गर्छन्।
* पावरहरू: तिनीहरू सामना गर्छन् र परमेश्वरको प्रायोगिक योजनाको विरोध गर्ने कुनै पनि दुष्ट बलों विरुद्ध लड्न।
अन्तिम तीन छनौटहरू मानव मामिलामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन्:
* प्रिन्सिपलिपरिटी: पार्थिव प्रिंसिपलहरु को लागी हेरविचार, देशहरु वा शहरहरु
* अङ्ग्रेजीहरू: मानिसजातिलाई परमेश्वरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू डेलिभर गर्नुहोस्
* एन्जिल्स: हाम्रो लागि अभिभावकको रूपमा सेवा गर्नुहोस्
सेन्ट अगस्टाइन, हिप्पो को बिशप कैथोलिक चर्च को पिटिच्युज मा उद्धृत गरिएको छ  त्यो “एन्जिल” आफ्नो कार्यालयको नाम हो, तिनीहरूको प्रकृतिको होइन। यदि तपाईं आफ्नो प्रकृतिको नाम खोज्नुहुन्छ भने, यो ‘आत्मा’ हो;यदि तपाईं आफ्नो कार्यालयको नाम खोज्नुहुन्छ भने, ‘स्वर्गदूत’ हो: उनीहरूले के हो, ‘आत्मा’, उनीहरूले के गरे, ‘स्वर्गदूत’। “तिनीहरूका सारा प्राणीहरूका साथ स्वर्गदूतहरू र परमेश्वरका दूतहरू छन्। किनभने तिनीहरू” सधैं स्वर्गमा मेरो पिताको अनुहार हेर “तिनीहरू” शक्तिशाली “हो जसले उहाँको वचन गर्छ, उहाँको वचनको आवाज सुनेर”। तीन पुरातत्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध छ गब्रिएल हो। उहाँले परमेश्वरको सन्देश दिनुभयो। पहिला पूजाहारी जकरियालाई सुसमाचार प्रचारक लूकाको सुसमाचार सुसमाचारको पुस्तकमा । “र जकरियाले स्वर्गदूतलाई भने,” म यो कसरी थाहा पाउनेछु? किनकि म बुढो मानिस हुँ, र मेरी पत्नी वर्षमा उन्नत हुन्छ । “ अनि स्वर्गदूतले उहाँलाई जवाफ दिए, “म गब्रिएल हुँ, जो परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिएको छ; र म तपाईंलाई बोल्न पठाएको थियो र तपाईंलाई यो सुसमाचार ल्याउन पठाइयो। अनि हेर, तपाईं चुप लागेर यी कुराहरू दिनहुँ बोल्न असमर्थ भयौँ, किनभने तपाईंले मेरो वचनमा विश्वास गर्नुभएन, जुन तिनीहरूको समयमा पूरा हुनेछ। “ र मानिसहरू जकरियाको प्रतीक्षा गर्दै थिए, र तिनीहरूले मन्दिरमा आफ्नो विलम्बको अचम्म सोचे। अनि जब बाहिर आउनुभयो, उनी तिनीहरूलाई बोल्न सकेनन्, र तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा दर्शन देखेका थिए; र उहाँले तिनीहरूलाई चिन्ह दिनुभयो र गम्भीर बनेको थियो। र जब सेवाको समय समाप्त भएको थियो, उनी आफ्नो घर गए। यी दिनहरू पछि आफ्नी श्रीमती एलिजाबेथले गर्भधारण गरेकी थिईन् र पाँच महिनासम्म उनले आफूलाई छिपाए, “यसकारण परमप्रभुले मलाई हेर्नुभयो, उहाँले मलाई हेर्नुभयो, मानिसहरूका बीचमा मेरो निन्दा गर।”  अर्को खाता हो, जब आर्कगेलिल गब्रिएलले मसीहको जन्म घोषणा गर्दै धन्य वर्जि मरियमलाई देखाएको छ। “छैटौं महिनामा स्वर्गदूत गब्रिएललाई परमेश्वरले परमेश्वरलाई पठाउनुभयो, नासरत नाउँ गरे, नासरत नाउँ गरेकी एक जना कन्याको नाममा यूसुफको दास थियो। र कुमारीको नाम मरियम थियो। अनि उहाँ तिनलाई आउनुभयो र भन्नुभयो, “हे, पूर्ण कृपा हो, प्रभु तिम्रो साथ हुनुहुन्छ!” तर उनी यसो भन्दै धेरै चिन्ताग्रस्त थिए, र उनको मनमा यो कस्तो भलो हुन सक्छ भनेर विचार गरे। अनि स्वर्गदूतले तिनलाई भने, “मरी डराओ, किनकि तपाईंले परमेश्वरको साथ पाएको पाउनुभएको छ। अनि हेर, तपाईं आफ्नो गर्भमा गर्भ गर्नुहुनेछ र छोरा जन्माउनुहुनेछ, र तपाईं उनको नाम येशूलाई बोलाउनुहुनेछ।
उहाँ महान हुनेछ, र उच्च पुत्रको पुत्रलाई बोलाइनेछ;
र प्रभु परमेश्वरले उसलाई आफ्नो पिता दाऊदको सिंहासन दिनुहुनेछ,
अनि उहाँले याकूबको घरमा सधैंभरि शासन गर्नेछ।
र उहाँको राज्यको अन्त हुनेछैन। “
अनि मरियमले स्वर्गदूतलाई भने, “यो कसरी हुन सक्छ किनभने मेरो पति छैन?” र स्वर्गदूतले तिनलाई भने,
“पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनेछ,
र सबैभन्दा उच्च शक्तिले तपाईंलाई उजागर गर्नेछ।
यसैले बच्चा जन्माउनु पवित्र भनिन्छ,
अनि हेर, तपाईंको किशोरीवाला एलिजाबेथले आफ्नो बुढो उमेरमा छोरा जन्माएको छ; र यो उनको छठे महिना हो जसले बोर्न भनिन्छ। परमेश्वरका लागि केही असंभव हुनेछैन। “ अनि मरियमले भने, “हेर, म परमप्रभुको शत्रु हुँ।यो तपाईंको वचन अनुसार मेरो होस्। “र स्वर्गदूत तिनबाट गए।” 
पवित्र आमा चर्चको शिक्षाअनुसार तिनीहरू “शुद्ध आध्यात्मिक प्राणीहरू हुन्”, स्वर्गदूतहरूले बुद्धिमानी र इच्छा गर्नेछन्: तिनीहरू व्यक्तिगत र अमर जीव हुन् “  साँच्चै यसले भगवानको उल्लेखनीय शक्ति देखाउँदछ। एन्जिल्स धेरै बाइबिलमा धेरै मिशनहरू पठाइएको छ। सदोम र गमोराको शहरहरू नष्ट गर्न दुई दूतहरूबाट पठाइएको थियो  जब बिलामले स्वर्गदूतलाई सडकमा देखे  । मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने खाता हो जब स्वर्गदूतले 13: 3-7 माशिमशोनको जन्म भविष्यवाणी गरे “र प्रभुको दूतले स्त्रीलाई देखा पर्यो र उसलाई भने,” हेर, तिमी बहादुर छौ र कुनै छोराछोरी छैनौ। तर तपाईं गर्भ र छोरा जन्माउनुहुनेछ। यसकारण सावधान रहनुहोस् र कुनै दाखरस वा बलियो पिउ पिऊदिनुहोस्, र अशुद्ध खाना खाऊन्, ढोका, तपाईं गर्भ गर्नुहुनेछ र छोरा जन्माउनुहुनेछ। कुनै रेजर आफ्नो टाउकोमा आउनेछैन, किनभने पुत्र जन्मबाट परमेश्वरले नै नजीक हुनेछ। अनि उहाँले इस्राएललाई पलिश्तीहरूको हातबाट बचाउनुहुनेछ। “ त्यसपछि आइपुग्यो र तिनको पतिलाई भने, “परमेश्वरको मानिस मकहाँ आउनुभयो, र तिनको गल्ती परमेश्वरका स्वर्गदूतको भनाइ थियो, धेरै भयानक; मैले उहाँलाई सोधें किनकि त्यो थियो, र उनले मलाई उनको नाम बताएनन्; तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘हेर, तिमी गर्भवती हुनेछौ र छोरा जन्माउनेछौ। त्यसोभए कुनै दाखरस वा बलियो पिउ पिऊदिनुहोस्, र कुनै पनि अशुद्ध खाना नदिनुको निम्ति पुत्रको जन्म परमेश्वरले आफ्नो मृत्युको दिनको निम्ति नजीक हुनेछ। ‘” न्यायाधीश 13: 21-23 ” प्रभुको दूतलाई अझ बढी देखाएन मनाओ र तिनकी पत्नीलाई। त्यसपछि मनो थाह थियो कि उहाँ प्रभुको दूत हुनुहुन्छ। अनि मनोआहले आफ्नी श्रीमतीलाई भने, “हामी निश्चित रूपमा मर्नेछौ, किनभने हामीले परमेश्वरलाई देखेका छौ।” तर तिनकी श्रीमतीले उनलाई भने, “यदि परमेश्वरले हामीलाई मार्न चाहनुभएको थियो भने, उहाँले जलाउने भोज र अनाज स्वीकार गर्नुभएन हाम्रो हातमा चढाउँदा, वा हामीलाई यी सबै चीजहरू देखाइदिन्छ, वा अहिले हामीले यी कुराहरू जस्तै घोषणा गरेका छौं। “
सीसीसी 332 देखि  “एन्जिल्सहरू सृष्टि र मुक्तिको इतिहासमा अवस्थित छन्, यस मुक्ति भन्दा पहिले वा नजिकबाट घोषणा र ईश्वरीय योजनाको उपलब्धिको सेवा गर्दै छन्: उनीहरूले पार्थिव प्रमोदवन बन्द गरे; लोट सुरक्षित गर्नुहोस्; हगर र तिनको बच्चालाई बचाउनुभयो। अब्राहामको हातमा रह्यो। तिनीहरूको सेवकाईले व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्यो; परमेश्वरले मानिसहरूको नेतृत्व गर्नुभयो। घोषणा गरिएको जन्म र कलिंग; र केही उदाहरणहरूलाई उल्लेख गर्न केवल अगमवक्ताहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। अन्ततः, गब्रिएलले स्वर्गदूतको पूर्ववर्ती र येशू आफैंको जन्मको घोषणा गरे। ” हामी साँच्चै आशिष् छौं कि यी स्वर्गीय प्राणीहरू तिनीहरूको अनुमोदनको लागि सोध्छन् र मदत गर्छन्। तर हामीले यो सम्झना गर्नुपर्छ, तिनीहरू केवल सृष्टिहरू हामी भन्दा बढी बुद्धिमानी छन्, तर तिनीहरू एक्लै परमेश्वरलाई जवाफ दिन्छन्। येशू, परमेश्वरको पुत्र बिरामी निको पार्न, लङ्गडाको उपचार गर्न, अन्धाको आँखा ल्याउन र मानिसहरूको पाप क्षमा गर्न आउनुभयो। स्वर्गदूतहरू उपासना गर्न र येशूको सेवा गर्ने र मरियमलाई सम्मान गर्न सृष्टि गरिएका थिए, जो सातानले यो (यो सर्फिम स्वर्गदूतको रूपमा सिर्जना भएको कारण) को अस्वीकार गर्नुको मुख्य कारण हो, तर यो विषय अर्को भविष्य ब्लग (राक्षसविज्ञान) मा अवस्थित हुनेछ। यस प्रार्थनाको साथ बन्द गरौं।
अनन्त र अनन्त ट्रिनिटी, हामी, तपाईंको सही थ्रीनसिई एक, साँचो परमेश्वरको रूपमा बोल्नु हुन्छ र तपाईंको साथमा स्वर्गमा प्राणीहरूको सानो रहस्य साझेदारी गर्न धन्यवाद। हामी जीवनमा हाम्रो यात्रामा सहयोग गर्न मद्दतकर्ताहरू बनाउनको लागि धन्यवाद। हामी हाम्रो अभिभावक स्वर्गदूतहरू र स्वर्गमा रहेका सबै स्वर्गदूतहरूलाई सिधै र संकीर्ण मार्गमा राख्नको लागि सोध्नुहुन्छ, दुश्मनसँग लड्नु हाम्रो सामु हो र ख्रीष्टको नजिकको सम्बन्ध निर्माण गर्न हामीलाई सहयोग गर्दछ। हामी यो तपाईंको सबैभन्दा उत्तम नाम सृष्टिकर्ता ईश्वर, ईन्चमा सोध्दछौं। पिताको नाउँमा, छोरा र पवित्र आत्मा। एमेन!
 Pilgrim पुस्तकका लागि प्रार्थना। www.magnificattours.com गैरी Appleberry द्वारा
 सीसीसी 32 9
 लूका 1: 18-25
 कैथोलिक चर्च 330 को पिटिच्युज
 उत्पत्ति 1 9: 15-17
 गन्ती 22: 31-33
 क्याथलिक चर्च चर्च को भाग्य 332
← Engler, tjenere til den aller høyeste gud grunnleggende engelologi Aaron JP Hackett | Teologi | 04/06/2019
Angelai, Aukščiausiojo Dievo tarnai pagrindinė angelologija Aaron JP Hackett | Teologija 19/06/2019 →